Ukufumanisa iBlue Yeti | Martech Zone
Ukufumanisa iBlue Yeti
NgoMvulo, Novemba 22, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
The Martech Zone unomathotholo Umboniso uqhuba abaphulaphuli abaninzi (ngaphezulu kwe-1,500!) Kwaye iya ithandwa ngakumbi veki nganye. Ngokuthandwa kukwafika ukugxekwa… kwaye UDave Woodson, Ipodcaster enamava, isinike ixesha elifanelekileyo (elifanelekileyo) ixesha elinzima malunga nomgangatho wethu wepodcast. Sasisebenzisa i Imakrofoni yeBlue Snowflake eofisini yethu - engancomiyo kwi-acoustics kwaphela.
Iziphumo yayizokuba imakrofoni yathatha nayiphi na impompo etafileni, isililo sefriji yethu, kunye nomgangatho we-tin-canny. Kwigumbi elithuleyo elinemathiriyeli yokufunxa, loo microphone yenza kakuhle. Ngokukodwa kuba iyaphatheka kwaye ingatyibilika ungene engxoweni yakho. Emva konyaka wokuhamba, isikrini sam saphuma saza safuna isincamathelisi ukuze sincamathisele umva. Ixesha lemakrofoni entsha!
UDave ucebise iBlue's Yeti USB Imakrofoni siyibekile ngoko nangoko kuba ibifikeleleka… ngaphezulu nje kwe- $ 100. Ifike ngaphambi kwenkqubo yethu kanomathotholo ixoxa Inqaku le-imeyile elitsha le-Facebook nabanye abaqeqeshi beshishini.
Wowu, sisilo esikhulu! Imakrofoni isebenze kamnandi kwaye umgangatho womboniso uphucule kancinci. Ndisakholelwa ukuba sinemiceli mngeni kwiidesika zentsimbi kunye negumbi le-echo esibambe umboniso kuyo ... kodwa sizakuqhubeka ukuyiphucula ngokuhamba kwexesha. Enkosi kakhulu kuDave ngengcebiso.
Imakrofoni ineendlela ezi-4 zokusebenza ezixhomekeke kubaphulaphuli bakho. Ineesetingi ezininzi, kuxhomekeke kwindawo yesandi ozama ukusikhetha - isitiriyo, i-cardiod, i-omnidirectional, kunye ne-bidirectional. Nantsi ingcaciso ye Useto lweYeti kunye nokusetyenziswa kwendawo yeBlue:
Siza kuqhubeka nokusebenza eofisini ukuphucula i-acoustics, kodwa andinantandabuzo yokuba siyifumene imakrofoni efanelekileyo yepodcasting. Esi sisiqwenga esikhulu sehardware ngexabiso elimangalisayo!
tags: Intengiso yePodcastImakrofoni
Izixhobo zoPhuculo lweWireframe zisebenzisana
Ukubhloga ngokudibeneyo: Ingoma yeRap